Jaona Voalohany 5:1-21
Mandresy an’izao tontolo izao izay mino an’i Jesosy (1-12)
Ny atao hoe tia an’Andriamanitra (3)
Toky ananantsika rehefa mivavaka (13-17)
Mitandrema eto amin’izao tontolo izao (18-21)
Izao tontolo izao manontolo dia eo ambany fahefan’ilay ratsy (19)
5 Izay rehetra mino fa i Jesosy no Kristy, dia naterak’Andriamanitra.+ Ary izay rehetra tia an’ilay Ray dia tia an’izay naterany koa. 2 Izao no ahafantarantsika hoe tia an’ireo zanak’Andriamanitra+ isika: Tia an’Andriamanitra isika, ary manaraka ny didiny. 3 Fa izao no atao hoe tia an’Andriamanitra: Mankatò ny didiny.+ Ary tsy mavesatra ny didiny.+ 4 Mandresy an’izao tontolo izao mantsy izay rehetra* naterak’Andriamanitra. Ary ny ahafahantsika mandresy an’izao tontolo izao+ dia ny finoantsika.+ 5 Iza moa no afaka mandresy an’izao tontolo izao?+ Izay mino hoe i Jesosy no Zanak’Andriamanitra.+ 6 Tamin’ny alalan’ny rano sy ny ra no nahatongavan’i Jesosy Kristy. Tsy tamin’ny alalan’ny rano ihany,+ fa tamin’ny alalan’ny rano sy ny ra.+ Ary ny fanahy no mijoro ho vavolombelona,+ satria ny fahamarinana. 7 Ireto telo ireto mantsy no vavolombelona: 8 Ny fanahy+ sy ny rano+ ary ny ra.+ Ary mifanaraka tsara izy telo ireo. 9 Manaiky an’izay lazain’ny olona isika, nefa izay lazain’Andriamanitra no mbola ambony kokoa. Ny zavatra lazain’Andriamanitra mantsy dia izay nolazainy momba ny Zanany. 10 Izay mino ny Zanak’Andriamanitra dia manaiky ao am-pony ny teny nolazain’Andriamanitra taminy. Izay tsy mino an’Andriamanitra kosa dia manao an’Andriamanitra ho mpandainga,+ satria tsy mino an’izay nolazainy momba ny Zanany. 11 Izao ilay teny nolazain’Andriamanitra: Nanome antsika fiainana mandrakizay Izy,+ ary amin’ny alalan’ny Zanany no hahazoantsika an’izany fiainana izany.+ 12 Izay manaiky ny Zanaka no hahazo an’io fiainana io, fa izay tsy manaiky ny Zanak’Andriamanitra kosa tsy hahazo an’io fiainana io.+ 13 Manoratra an’izany aminareo aho mba ho fantatrareo fa hahazo fiainana mandrakizay ianareo,+ dia ianareo izay mino ny anaran’ny Zanak’Andriamanitra.+ 14 Izao ny toky ananantsika* momba an’Andriamanitra:+ Na inona na inona angatahintsika aminy ka mifanaraka amin’ny sitrapony, dia mihaino antsika izy.+ 15 Ary raha fantatsika fa mihaino antsika izy na inona na inona angatahintsika, dia fantatsika fa tena ho azontsika izay angatahintsika, satria nangatahintsika taminy.+ 16 Izay mahita ny rahalahiny manao ota tsy mahafaty, dia tokony hangataka ho an’ilay rahalahiny. Ary homen’Andriamanitra fiainana ilay rahalahiny,+ dia izay tsy manao ota mahafaty.+ Misy ota mahafaty mantsy. Tsy mampirisika na iza na iza hivavaka momba an’izany ota izany aho. 17 Ota daholo izay zavatra tsy marina ataon’ny olona,+ kanefa misy ota tsy mahafaty. 18 Fantatsika fa tsy zatra manota izay rehetra naterak’Andriamanitra. Miaro azy ilay naterak’Andriamanitra,* ka tsy afaka mifehy* azy ilay ratsy.+ 19 Fantatsika fa avy amin’Andriamanitra isika, fa izao tontolo izao manontolo kosa eo ambany fahefan’ilay ratsy.+ 20 Fantatsika anefa fa efa tonga ny Zanak’Andriamanitra,+ ary nomeny fahiratan-tsaina* isika mba hahalala an’ilay tena Andriamanitra. Ary amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany isika no tafaray amin’ilay tena izy,+ dia ilay tena Andriamanitra sady mpanome fiainana mandrakizay.+ 21 Ry zanako malalako, mitandrema amin’ny sampy.+
^ Abt: “ny zava-drehetra.”
^ Na: “Sahy miteny an’izao isika.”
^ Izany hoe Jesosy Kristy, ilay Zanak’Andriamanitra.
^ Na: “mikasika.”
^ Abt: “saina mahataka-javatra; fahaizana.”